Farmaajo oo ku dhawaaqay go’aan cirka ku sii shareeray khilaafkii kala dhexeeyay Rooble - Bulsho News
9/11: Wiilka ugu yar carruurta Cusama Bin Laden muxuu ka...
Farmaajo oo ku dhawaaqay go’aan cirka ku sii shareeray khilaafkii kala dhexeeyay Rooble
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyey awoodihii Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Warkan ayaa lagu faafiyay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada.
Farmaajo ayaa sheegay in Rooble sameeyay tallaabooyin xadgudub ah ku xquuqda mushaaraadka ciidamada .
War-saxaafadeedka ka soo baxay madaxweynaha ayaa lagu sheegay “Inta lagu jiro xaaladdan, hay’adaha kala duwan ee dowladdu waxay sii wadayaan hawlaha ay shacabka ugu adeegayaan ee lagama maarmaanka u ah socodsiinta hawlaha xukuumadda, si waafaqsan Qodobka 102aad ee Dastuurka Kumeelgaarka ah oo si cad u qeexaya in Wasiir kasta uu isagu masuul ka yahay Howlaha Wasaaraddiisa, ayna tahay in lagu tixgeliyo, iyagoo aan ku dhaqaaqi karin xil ka qaadis iyo xil magacaabis inta laga dhammeystirayo doorashooyinka dalka”.
Ra’iisal wasaare Rooble kama uusan hadlin hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha.
Labada mas’uul ee ugu sarreeya dalka ayaa dhowr jeer isku dhacay, iyagoo si shaac baxsan isugu qabtay shaqo ka fariisin iyo shaqaaleysiin ay ka kala sameeyeen laamaha amniga gudahooda.
Jawaabtu waa maya. Rooble oo aan siyaasadda Soomaaliya markii hore laga aqoonin waxaa la bartay islamarkii uu madaxweyne Farmaajo u magacaabay xilka Ra’iisul Wasaaraha, bishii September ee sanadkii lasoo dhaafay.
Inta uusan siyaasadda soo galin waxa uu ahaa nin cilmiga injineernimada rayidka kusoo bartay dalka Sweden kuna shaqeeya.
Kaddib markii uu madaxweynaha muddo kororsiga sameystay bishii April, iyadoo aysan doorasho dhicin, waxaa dhacay qalalaasihii siyaasadeed ee ugu xumaa ee ay Soomaaliya soo mara muddo sannado ah.
Maadaama uu Rooble magaciisa kor u kacay, wuxuu billaabay inuu dhowr arrimood uga soo horjeesto Farmaajo, taasoo sababtay in madaxweynaha uu caroodo, sida ay qortay Wakaaladda Wararka ee AFP.
Bishii lasoo dhaafay waxa uu booqday Kenya, isagoo muujiyay inuu daggan yahay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada waddan, balse safarkaas wuxuu yimid maalmo kaddib markii madaxweyne Farmaajo uu soo saaray wareegto uu ku mamnuucayay in wax heshiisyo ah lala galo dowlado shisheeye, ilaa inta ay ka dhacayaan doorashooyinka.
Kaddib Rooble waxa uu haddana u jeestay Hay’adda Soomaaliya awoodda badan ku leh ee Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA), taasoo uu ku dhaliilay qaabka ay u maareysay baaritaan heer sare ahaa oo ku saabsanaa gabar 25 jir ahayd oo ka tirsaneyd hay’addaas, oo lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax, taasoo la waayay meel ay jaan iyo cirib dhigtay.
Caro badan ayaa ka dhalatay arrinta ku saabsan waayitaanka Ikraan, waxaana si weyn hadalheynteeda ay u qabsatay Baraha Bulshada.
Qoyska gabadhaas ayaa hay’adda NISA ku eedeeyay inay dileen Ikraan — fikraddaas oo ay ku raaceen dad badan oo Soomaali ah, oo sheegayay inay caddaalad u baahan tahay.
Markii uu Rooble shaqada ka eryay agaasimaha hay’addaas, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir – oo la sheego inuu saaxiib dhow la yahay Farmaajo – falcelinta madaxweynuhu waxay ahayd inuu markii hore xilkiisa ku celiyay, kaddibna uu u dallacsiiyay jago taas ka sarreysa oo ah la taliyaha amniga qaranka.
Ra’iisul Wasaaruhu waxa uu tallaabadaas uga jawaabay inuu madaxweynaha ku eedeeyay “hor istaagidda” baaritaanka, isagoo arrintaasna ku tilmaamay “mid khatar ku ah hannaanka dowladnimada”.
Saraakiisha sar sare ee cidanka Soomaaliya ayaa maanta oo Khmiis ah kulan ku yeeshay xarunta dhexe ee NISA
Maxaa hor yaalla Soomaaliya?
Dad badan waxay ka cabsi qabaan in arrimahan ay halis galinayaan doorashada oo markii horeba aad ku taagneyd cago adag.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa majaraha u haya hannaanka doorashada
Laakiin ma cadda xilliga ay baarlamaanka soo dooran doonaan madaxweyne.
“Haddii khilaafkan aan loo xallinin si nabad ah, waxa uu sii adkeyn doonaa dagaal kasta oo siyaasadeed oo ka socda Soomaaliya, oo ay ku jirto doorashada, taasoo dib usii dhici doonta haddii arimahan la joojin waayo,” ayuu AFP ku yiri Abdiqani Cumar, oo horay dowladda Soomaaliya uga soo qabtay xil sare.
Roble waxa uu horayba Farmaajo ugu eedeeyay inuu dib uga ceshanayo “mas’uuliyadihii doorashada iyo amniga” ee isaga loo igmaday goor sii horreysay oo sanadkan gudihiisa ah.
Khuburada ka faaloota arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya in hay’adda Sirdoonka Soomaaliya waxay aasaas u tahay dagaalka ka dhanka ah ururrada gacan saarka la leh al-Qaacida, kuwaasoo si deg deg ah uga faa’iideysan kara daciifnimo kasta oo imaata.
WARBIXIN: Xiddigo Daafac Ka Ciyaara Oo Ka Goolal...
Taliye Odowaa oo kulamo xasaasi ah ka billaabay...